Duulimaadyada ka imanaya Calgary ilaa Amsterdam waxaa bilaabay WestJet
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada ka imanaya Calgary ilaa Amsterdam waxaa bilaabay WestJet
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Nederland • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
WestJet waxay ku soo bandhigeysaa Amsterdam adeegga Calgary iyadoo duulimaad cusub oo bilaabaneysa 5ta Ogosto diyaaradda Boeing 787 Dreamliner.
Adeegga WestJet ee u dhexeeya Amsterdam Airport Schiphol iyo Calgary International Airport wuxuu shaqeyn doonaa laba-jeer usbuucii.
Wadada ayaa lagu shaqeyn doonaa WestJet's 787 Dreamliner.
Adeeggan cusub ayaa loo qabtay si loo hubiyo in duulimaadyada transatlantic ee ka tagaya Calgary ilaa Amsterdam loo qoondeeyay inay taageeraan bixitaanka maalinta dambe iyo imaatinka maalinta.
WestJet waxay maanta shaacisay inay balaarinayso shabakadeeda caalamiga ah laguna dari doono mid ka mid ah magaalooyinka ugu xiriirka badan aduunka, Amsterdam, Netherlands. Maaddaama ay tahay diyaaradda duulimaadyada ugu badan ka timaada Calgary, adeegga cusub ee ka imanaya xarunta WestJet wuxuu ku shaqeyn doonaa 787 Dreamliner, laga bilaabo Ogosto 5, 2021.
John Weatherill ayaa yidhi "Waxaa naga go'an in aan maal gashiga caalamiga ah meel dhigno, anagoo ah hogaamiyaasha safarada iyo dalxiiska, si aan u taageerno dib u bilaabida safarka caalamiga ah iyo soo kabashada dhaqaalaha Canada". WestJet, Madaxa Sarkaalka Ganacsiga. Duulimaadyadu waxay bilaaban doonaan dabayaaqada xagaagan, waxaan rajeyneynaa inaan gacan ka geysano isku xirka dadka reer Kanada iyo kuwa ay jecel yihiin ee ku nool Yurub, iyadoo aan sii wadno bixinta fursado la awoodi karo oo loogu talagalay kuwa doonaya inay booqdaan ama dib ula xiriiraan asxaabta iyo qoysaska ku nool waddankeenna weyn.
Adeegga WestJet ee u dhexeeya Amsterdam Airport Schiphol (AMS) iyo Calgary International Airport (YYC) wuxuu shaqeyn doonaa laba-jeer usbuucii laga bilaabo Ogosto 5, 2021 wuxuuna kordhi doonaa ilaa seddex jeer usbuucii laga bilaabo Sebtember 9.
"Alberta waxay diyaar u tahay inay furnaato xagaaga, warkan ka soo yeeray WestJet wuxuu muujinayaa sida aan ugu dhownahay in socdaalayaasha caalamiga ah ay dib ugu soo laabtaan Alberta," ayuu yiri Doug Schweitzer, Wasiirka Shaqada, Dhaqaalaha, Hal-abuurka, Dowladda Alberta. Wadooyinka cusubi waxay kor u qaadi doonaan warshadeena dalxiis markay u baahdaan waxayna mar kale adduunka ku soo bandhigayaan safar ammaan ah. ”
"Sannadkan, martidayadu waxay heli doonaan ikhtiyaar kale oo toos ah oo ka imanaya Calgary illaa xarun ganacsi iyo dhaqan oo mashquul ah," ayuu yiri Bob Sartor, Madaxweynaha & Agaasimaha Guud, Maamulka Madaarka Calgary. Wadada cusub ee WestJet ee gurigooda iyo xaruntooda YYC ilaa Amsterdam, waxay isku xiri doontaa Calgarianka Yurub iyo Yurubiyanka ilaa Alberta iyadoo la mari doono mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ugu fiican adduunka.
Wadada waxaa lagu shaqeyn doonaa WestJet's 787 Dreamliner, oo lagu soo bandhigi doono kuraasta jiifka ah ee diyaaradda ee laga heli karo qolka ganacsiga oo ay weheliso cunno-dalbasho iyo madadaalo. Adeeggan cusub ayaa loo qabtay si loo hubiyo in duulimaadyada transatlantic ee ka tagaya Calgary ilaa Amsterdam loo qoondeeyay inay taageeraan bixitaanka maalinta dambe iyo imaatinka maalinta. Xidhiidhyo ku habboon ayaa laga heli karaa Amsterdam illaa iyo tobanaan meelood oo heer caalami ah, oo ay ku jiraan Athens, Berlin, Edinburgh, Lisbon, Madrid, Manchester, Milan, Munich, Vienna, Venice iyo inbadan.
David Goldstein, oo ah agaasimaha guud, Travel Alberta ayaa yiri: "Waxaan ku faraxsanahay soo noqoshada marinnada muhiimka ah ee hawada caalamiga ee Alberta In kasta oo aan xiriir dheer oo diirran la leenahay socdaalka Dutch-ka ah ee doonaya in ay sahamiyaan qaybteenna adduunka, Amsterdam sidoo kale waa xarun muhiim u ah quudinta safrayaasha ka kala imanaya Yurub oo dhan. Waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno WestJet maaddaama ay ballaarinayaan jidadkooda caalamiga ah ee Alberta. ”
Faahfaahinta adeegga WestJet ee u dhexeeya Calgary iyo Amsterdam:
wadada Frequency Ku bilow Date
Calgary - Amsterdam 2x toddobaadle ah Ogast 5 - Sebtember 5, 2021
3x toddobaadle ah Sebtember 9 - Oktoobar 31, 2021
Amsterdam - Calgary 2x toddobaadle ah Ogast 6 - Sebtember 6, 2021
3x toddobaadle ah Sebtember 10 - Nofeembar 1, 2021
Seychelles Waxay Ku Lumisay Horjooge Dalxiis Myriam St.Ange
2022 Baabuurka Honda Baasaboorka si uu ugu tartamo Mareykanka ...
Dhaxalka Dhaqanka Qaniga ah ee Maldives ayaa ku qaylinaya ...
Goobaha wareegga ee Waqooyiga Ireland ayaa ka dhammaada qosolka
Duulimaadyada cusub ee KLM ee Amsterdam ilaa Barbados